virus ရှိမရှိ စစ်မယ် - Page2- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကျွန်တော်စက်ကိုတစ်ခါတော့ virus ကိုက်ဖူးတယ် Trijon ထရိုဂျင်လိုတော့ပြေားတယ်ဗျာ အဲဒါစက်က အလုပ်ကိုပုံမှန်လုပ်တယ် ဒါပေ့မယ် တစ်ခါတစ်လေရပ်ချင်ရင်ရပ်နေတာဗျာ နောက်ဆုံးတော့စက်ကို ဝင်ဒိုးပြန်တင်တယ်ဗျာ ဟာဒစ်လည်းဖော့မတ်ချလိုက်ရတယ်ဗျာ ဗိုက်ရပ်ကိုက်တဲ့ပါတေးရှင်းထည်းကို ဖိုင်တစ်ခုထည်ပြီးရင် ငါးမီနစ်လောက်ပဲစောင့် ဖိုင်ကဖွင့်မရတော့ဘူး ဖြစ်တာလဲအဲပါတေးရှင်းတစ်ခုတည်းပဲ နောက်ထပ်ပါတေးရှင်းတွေတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး အန်တီဗိုက်ရပ်လည်းတင်ထားပါတယ် ဒါကိုပဲဝင်ကိုက်သွားတာပါ ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာ
28-01-2010, 03:44 AM
ကို pyonemgmg ခင်ဗျာ........Trojan ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်အောက်မှာ Trojan remover လေးတင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ.......အဲဒါလေးနဲ့ သာရှင်းထုတ်လိုက်ဗျာ.......ရှင်းသွားလိမ့်မယ်......ဒီဆော့ဝဲလေးလည်း ဖိုရမ်ထဲကနေပဲဒေါင်းထားတာပါ.....အခုက ဘယ်နားမှာလည်းမသိလို့ ကိုယ်တိုင်ပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.......ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့........virus ကိုက်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး Anitvirus နဲ့scan ဖတ်လိုက်ပါ......ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ partition အားလုံးကိုပေါ့.......ပြီးမှ window ပြန်တင်ချင်တယ်ဆိုတင်ပေါ့ခင်ဗျာ......virus ရှိနေလို့window အသစ်တင်လိုက်လည်း .......OS မတင်ထားတဲ့ တစ်ခြား partition မှာရှိတဲ့ virus က သေမသွားဘူးခင်ဗျာ.......ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးကို အရင်ဆုံး Scan ဖတ်လိုက်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်.......
အောက်မှာ Trojan remover လေးပါခင်ဗျာ.......
နီထွန်းဦး, အိုက်ထွန်း, moe_poung, phoetharlay
အင်းကောင်းပါတယ်အစ်ကိုရေးထားတာလေးက ဗဟုသုတလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပေ့မယ်ညီလေးမေးချင်တာတစ်ခုက တကယ်လိုဗိုက်၇ပ်ကိုက်ပြီဆိုရင် အစ်ကိုပြေားသလို စစ်တယ် တွေ့တယ် အဲဒါနဲ့ အန်တီဗိုက်ရပ်နဲ့စစ်တယ် ဘယ်လိုအမျိုးအစားဆိုတာလည်းသိလာတယ် အဲဒါနဲ့ အစ်ကိုပြေားသလို regedit ကနေသွားရှင်းမယ်ဆိုရင် အဲဒီဗိုက်ရပ်ရဲ့ effect တွေ့ကျန်နေအုံးမှာလား နောက်ပြီတော့ အဲဒီလိုပဲကိုက်သမျှဗိုက်ရပ်တော်တော်များများကိုအစ်ကိုပြေားသလိုသတ်ိလို့ရလား မရဘူးလား ပြေားပြပေးကြပါအုံးဗျာ နောက်ပြီတော့ ကျွန်တော်စက်ကို စာဖတ်နေရင်နဲ့ Trijon virus ကိုက်တယ်ဗျာ အဲဒါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းတောင်မသိဘူး သူကတစ်ခါတည်း LAN ကိုပါဖြတ်ပစ်လိုကတာ ပြန်လုပ်လည်းမရတော့ဘူး အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဖြစ်နေတာ အစ်ကိုတစ်ယောက်ပြေားပြတယ် System Restore ကိုတစ်ရက်လောက်ကြိုခေၞလိုက်တယ် အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ဗျာ အင်းပြသနာများနဲ့ကခုန်နေတော့လည်း.........စိတ်တော့်တော်တော်လေးညစ်ရတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေက ကွန်ပျုတာမှာ AntiVirus တင်ထားတယ် အင်တာနက်ကလည်းချိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ အိုကေအဆင်ပြေတယ် စိတ်ချ၇တယ်ဆိုပြီး နေနေတဲ့ သုတွေများပါတယ်..။ ကျွန်တော်လည်း ဒီအတိုင်းပါဘဲ
ကျွန်တော်သုငယ်ချင်းက မင်းစက်ထဲ မှာ Virus တွေနဲ့ တဲ့အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်းအလုပ်၇ှုပ်သွားတယ် ..။ Kaspersky တောင် င်္ကီးတွေဘာတွေပြောင်းလိုက် ၇သေးတယ် ..။ ဒါလည်း စိတ်မချနိုင်လို့အောက်က နည်းလေးနဲ့ ကျမှ အလုပ်ဖြစ်သွာတယ်..။ အောက်ကနည်းက Notepad နဲ့ စစ်နဲ့ နည်းလေးပါ ..။ စမ်းကြည့် ကြပေါ့ 
အပေါ် က အနီရောင်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာလေးကို notepad ထဲမှာ ကူးထည့်ပြီးရင် .bat , .exe , ဆိုပြီးတော့ desktop ပေါ်မှာ save လိုက်ပါ .. အဲသလို save ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီ file လေးက ပျောက်မသွားရင်တော့ ကိုယ့် ရဲ့  antivirus ကို ဖြုတ်ပြီးတော့အသစ်တာလဲတော့ ဗျို့ ...။
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ ဝင်းအောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စွမ်းကမ္ဘာ, ဆန်းမောင်, ညီစေမင်း, နီထွန်းဦး, မျိုးဟန်ထက်, အိုက်ထွန်း, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်လွင်ဦး, မြင့်မိုရ်, kyaukphyu, KznT
ဟုတ်ပါတယ် Windows7မှာ ဆိုရင်တော့ မရပါဘူး ။ 'setup' ins not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. လို့ပဲ ပေါ့နေပါတယ်။
ပို့စ်7ခုအတွက် 27 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အင်း အစ်ကိုကိုမေးချင်ပါတယ် virus swftware တွေကဘယ် ဆော်ဝဲတွေက အဆင်ပြေဆုံးလည်းပြောပြပေးပါဦး ။virus သတ်ချင်လို့ ပါ update ကရောအမြဲလုပ်ပေးနေရမှာလား။
Find More Posts by ဟိန်းနေဇင်
ဘယ် software က အဆင်အပြေဆုံးလဲ ဆိုတာ ပြောရတော. ခက်ပါတယ်။ ဘာလို.လဲ ဆိုတော. Antivirus software တွေကို လေ.လာကြည်.လိုက်ရင် ဒီလမှာ ဒီ software က အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပေမဲ.၊ နောက်လကြရင် တခြား Software က အကောင်းဆုံး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ကိုယ် ဘယ်ဟာ သုံးဖူးလဲ၊ ကောင်းကောင်း သုံးတတ်လား၊ Update အလွယ်တကူ လုပ်လို. ရလား စတဲ. အချက်တွေကိုပဲ အဓိက ထားရွေးပေးပါ။ Antivirus သုံးရင်တော. Update လုပ်ပေးဖို.တော. လိုပါတယ်။ Internet ချိတ်ထားရင် နေ.တိုင်းလိုလို Update လုပ်သင်.ပါတယ်။ Internet မချိတ်ထားပေမဲ. Memory Stick တွေ တပ်လိုက်၊ ထုတ်လိုက် လုပ်တတ်ရင်လဲ Update လုပ်ပေးဖို. လိုပါတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်ပတ် တခါ၊ ၂ ပတ်တခါ လောက်တော. လုပ်ပေးသင်.ပါတယ်။ Antivirus တွေနဲ. ပတ်သတ်ပြီး ကိုသန်.ဇင်ဌေး စုစည်းထားပေးတာ ရှိပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သွားကြည်.ပေးပါ။ Freeware သုံးချင်တာဆိုရင်တော. ကိုမျိုးဟန်ထက် စုစည်းထား ပေးပါတယ်။ Update လုပ်လို. တတ်တဲ.၊ ကြိုက်နှစ် သက်ရာ တခုကိုသာ ရွေးချယ်ပါ။
စွမ်းကမ္ဘာ, မျိုးဟန်ထက်, အိုက်ထွန်း, bagothar85